Pprinted marika mahazatra bopp akrika adhesive kasety China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Ny tenantsika manokana vita pirinty,Bopp akora vita amin'ny Bry Acrylic,Tape fantsom-bolo Custom
Home > Products > Taling Sealing > Tipe vita pirinty > Pprinted marika mahazatra bopp akrika adhesive kasety
Fitaovana vita pirinty akopika akopika vita pirinty vita pirinty
Ity kasety ity dia manana adhesive mafy, fanoherana avo sy rano madio. manohana ny sakan'ny sakany, ny halavany, ny hateviny ary ny loko rehetra hanatrarana tsara ny fitakinao. Izy io dia afaka mitondra am-bava vahaolana feno amin'ny fonosana fonosana ho an'ny famatsiana sy famatonana rehetra. Ny orinasa dia manana 3 tsipika famokarana famehezana 3, ny famoahana isan'andro dia 20 taonina. Azontsika atao ny manampy amin'ny fanitarana ny tsenanao ary ahazoana valiny mavitrika marobe.
Ny tenantsika manokana vita pirinty Bopp akora vita amin'ny Bry Acrylic Tape fantsom-bolo Custom Voapetaka bokotra vita pirinty marika vita pirinty Tape fampitandremana vita pirinty Fikorontanana vita vita pirinty Fametahana vita printy